Iyo Apple Watch ichakwanisa kuyera glucose kubva mukutanga kwayo | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch ichakwanisa kuyera glucose kubva mukutanga kwayo
Mazuva ano takakwanisa kuverenga zvinyorwa zvakasiyana siyana online izvo zvakavimbiswa kuti wachi iyo Apple ichatanga mukutanga kwaApril inogona kuyera glucose muropa. Zvisinei, zvinoita sekunge ruzivo urwu harusi rwechokwadi zvachose Uye zvaizove kuburikidza ne sensor inogona kuiswa pasi peganda iyo iyo Apple Watch yaizotora ruzivo irwo rwaizomiririra muchimiro chegirafu.
Muchidimbu, hazvisi chaizvo kuti Apple Watch iri kuyera shuga yeropa, ingave iri kambani yeDexcom iyo ichave ichigadzira chirongwa cheApple Watch icho, yakanamatira kune yambotaurwa sensor yaigona kuyera iwo mazinga.
Panguva yekuratidzwa kweApple Watch maziso ese akaenda kumaseru ayo aizove kana kwete. Mhinduro kubva kuna vanachiremba uye nyanzvi dzakabatana dzakakurumidza kutanga kuoneka nemushonga wavakavimbisa kuti Apple Watch yaisazokwidza mamwe ma sensors ayo aitarisirwa kuve nayo.
Semhedzisiro, vakafanotaura kuti wachi iyo Apple yaizotanga haigone kuyera zvese izvo mamirioni evateveri vechiratidzo pakutanga zvavakarota nezvazvo. Ikozvino, kana yave kuda kutengeswa, apo nhau dzayo dzinotanga kubuda uye ndizvozvo Sezvaunenge uchitoziva, Apple yakabvunza vagadziri kuti vagadzire maitiro avo.
Huye, chokwadi ndechekuti zvinoita sekunge kambani yeDexcom iri kugadzira chirongwa cheiyo Apple Watch, iyo ichabatana ne ikozvino Glocusa tarisa kuti ivo vakagadzira uye vakadaidza Dexcom G4. Iyo sensor iyo Apple Watch yaisazove nayo pamuviri wayo asi yaizoiswa pasi peganda remunhu kuti igare ichiona mazinga eglucose, ichifanira kuitsiva mazuva ese makumi matatu-30.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch ichakwanisa kuyera glucose kubva mukutanga kwayo
Apple inowedzera zviviri-chinhu chechokwadi cheMessage uye FaceTime
19 kuziva kweiyo nyowani Steve Jobs bhaisikopo